विराटनगर, १२ जेठ । विवरण नदेखाई राजश्व ठगी गरेको भन्दै आन्तरिक राजश्व कार्यालय विराटनगरले तीन दर्जन व्यापारिक फर्मको बैंक खाता रोक्का गरेको छ । कार्यालयका अनुसार विवरण लुकाइ राजश्व ठगी गर्ने फर्म त्यसका प्रमुख तथा सञ्चालकहरुको समेत बैक खाता रोक्का गरेको हो । आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा दर्ता भए पनि व्यापारिक कारोबारको विवरण नबुझाइ राजश्व ठगी गर्ने व्यापारिक फर्मको...
विराटनगर, १२ जेठ । विवरण नदेखाई राजश्व ठगी गरेको भन्दै आन्तरिक राजश्व कार्यालय विराटनगरले तीन दर्जन व्यापारिक फर्मको बैंक खाता रोक्का गरेको छ । कार्यालयका अनुसार विवरण लुकाइ राजश्व ठगी गर्ने फर्म त्यसका प्रमुख तथा सञ्चालकहरुको समेत बैक खाता रोक्का गरेको हो...
जग्गा बाँझो राख्नेलाई जरिबाना
चितवन, ११ जेठ । चितवनको रत्ननगर नगरपालिकाले जग्गा बाँझो नगरवासीलाई जरिवाना गर्ने भएको छ । खाद्य उत्पादनमा नगरपालिकालाई आत्मनिर्भर बनाउन जग्गा बाँझो राख्नेलाई २०७४ सालको नगरसभाले जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो । कृषियोग्य जग्गा बाँझो राख्दा खाद्यवाली र...
मूल्यमा एकरुपता ल्याउन अलैंचीका बिरुवाको मूल्य तोकियो
बेसीशहर (लमजुङ), १० जेठ। नेपाल अलँची व्यवसायी महासंघ, लमजुङले जिल्लामा अलैँचीका बिरुवाको मूल्य निर्धारण गरेको छ । जिल्लाभर रहेका अलैँची बिरुवाको मूल्यमा एकरुपता कायम गर्न महासंघ जिल्ला शाखाको बुधबार बसेको बैठकले बिरुवाको मूल्य निर्धारण गरेको हो...
स्मार्ट लाइसेन्समा लापरबाही गर्नेलाई मन्त्रीकै स‌ंरक्षण
काठमाडाैं, ९ जेठ । सवारीसाधानको स्मार्ट लाइसेन्सका लागि सेवाग्राहीले एक वर्षसम्म कुर्नुपर्ने बाध्यता छ। यसमा जिम्मेवार भारतीय कम्पनी मद्रास सेक्युरिटीलाई सरकारले नै संरक्षण गरेको छ। मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सको दादागिरीका कारण सेवाग्राही मर्कामा छन्...
जोशी हाइड्रोपावरको आइपीओ खुल्यो
काठमाडौं, ८ जेठ । जोशी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीको आइपिओ आजबाट बिक्रि खुला भएको छ । यो इलाम जिल्लाका आयोजना प्रभावित स्थानीयका लागि बिक्रि खुला भएको हो । इलाम नगरपालिका वडा नं. १, ३ र ४ का स्थानीय बासीले यस आइपिओमा आवेदन दिन पाउनेछन् । कम्पनीले १००...
काठमाडाैं, ८ जेठ । मलेसियाले रोजगार भिसा प्रक्रियाका लागि पहिलो चरण मानिएको इमिग्रेसन सेक्युसरटी क्ल्यिरेन्सको काम अर्को सूचना जारी नभएसम्म सोमबारदेखि बन्द गरेको छ। कामदारलाई आर्थिक भार पर्ने गरी मलेसियाले एकतर्फी रुपमा लागू गरेका ६५ वटा संयन्त्रहरुलाई...
सिरहामा एनआईसी एशियाकोे शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा
काठमाडाैं, ८ जेठ । एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेडले सिरहा कल्याणपुर नगरपालिकाको भोक्राहामा शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा संचालनमा ल्याएको छ। शाखारहित बैंकिङ्ग सेवाको उद्घाटन प्रदेश नं. २ का प्रदेश सभा सदस्य सुरेश कुमार मण्डलले गरेका हुन्। उक्त शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा...
किङ्गफिसरको ‘गुड टाइम्स्’ नेपालमा
काठमाडौँ, ६ जेठ । एशियाकै ठूलो बियर कम्पनीहरु मध्ये एक युनाइटेड ब्रुअरीज लिमिटेडले किङ्गफिसर प्रिमियम तथा किङ्गफिसर स्ट्रङ्ग नेपाली बजारमा ल्याएको छ । यति ब्रुअरीसँगको सहकार्यमा उक्त ब्राण्ड नेपाल भित्रिएको हो । युनाइटेड ब्रुअरीज लिमिटेड हाइनिकेन एनभीसँगको...
शेयर बजार : एक अर्ब आठ करोड बढीको कारोबार, घट्यो कारोबार
काठमाडौँ, ५ जेठ । धितोपत्र बजारमा यस साता रु एक अर्ब आठ करोड १९ लाख ४१ हजार बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । नेपाल स्टक एक्चेञ्जकाअनुसार यस साता २३ लाख २९ हजार ४४० कित्ता शेयर खरिद बिक्री भएका छन् । कारोबार रकम गत साताको भन्दा ४५ दशमलव ९६ प्रतिशत कम हो । गत साता...
नागढुंगा–धुलिखेल मेट्रो : निर्माणका लागि विश्वव्यापी बोलपत्र, लागत करिब दुई खर्ब
काठमाडौँ, ५ जेठ । काठमाडौँको नागढुंगादेखि काभ्रेपलान्चोकको धुलिखेलसम्म मेट्रो रेल निर्माणका लागि सरकारले आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षता रहेको लगानी बोर्डले सो मेट्रो रेल निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो...